Sei Reverse Logistics Solutions Inogona Kufambisa Kudzosa Kugadziriswa muE-Commerce Marketplace | Martech Zone
Sei Reverse Logistics Solutions Inogona Kufambisa Kudzosa Kugadziriswa muE-Commerce Marketplace
Muvhuro, Mbudzi 1, 2021 Muvhuro, Mbudzi 1, 2021 Gaurav Saran
Denda reCOVID-19 rakarova uye chiitiko chese chekutenga chakachinja kamwe kamwe uye zvachose. Kupfuurisa 12,000 zvitoro zvezvidhinha-nedhaka zvakavharwa muna 2020 sezvo vatengesi vaitama kunotenga pamhepo kubva mukugarika nekuchengetedzeka kwedzimba dzavo. Kuti uenderane nekuchinja kwemaitiro evatengi, mabhizinesi mazhinji akawedzera kuvepo kwavo e-commerce kana kutamira kune yekutengesa online kekutanga. Sezvo makambani arikuramba achiita shanduko iyi yedhijitari kuenda kunzira nyowani yekutenga, vanorohwa nehana yechokwadi yekuti sezvo kutengesa kwepamhepo kunowedzera, ndizvo zvinoitawo kudzoka.
Kuti uenderane nezvinodiwa zvekugadzirisa kudzoka kwevatengi, vatengesi vanofanirwa kushandisa yakasimba, tekinoroji-inogonesa reverse logistics kubatsira kugadzirisa maitiro ekudzoka, kubvisa hunyengeri hwekudzoka chiitiko, uye kuwana mibairo yakakura. Kuedza kuyambuka mumvura ine matope ekudzoreredza kugadzirisa kunogona kuve nzira inonyengera inoda rubatsiro rwenyanzvi mune zvekunze zvinhu. Nekusimudzira a Inodzosa Management System (RMS) nekuwedzera kuoneka uye vatengesi vemberi vekutevera vanogona kubata zvirinani kudzoka, kuvandudza mari yavo, uye kuwedzera chiyero chevatengi.
Chii chinonzi Returns Management System (RMS)?
Chikuva cheRMS chinoshandisa zvakanyanya kurongeka kudzoka kugadzirisa mafambiro ekugadzirisa uye kuteedzera chikamu chese cherwendo rwechigadzirwa chakadzoserwa, kubva panguva iyo chikumbiro chaendeswa kusvika panguva iyo chigadzirwa chepakutanga chinodzoserwa muinventory yekambani kuti itengeswezve, uye kudzoka kwemutengi kwave. yakapedzwa.
Iyo nzira inotanga nekudzoka kwekutanga, iyo inogadziriswa kana mutengi achikumbira kudzoka. Chinangwa chemhinduro yeRMS ndechekuona kuti ruzivo rwekudzoka kwemutengi rwakanaka semaitirwo ekutenga. Mhinduro yeRMS yakagadzirirwa kubatsira makambani kuvandudza basa ravo revatengi nekushandisa otomatiki kutaurirana kupa mutengi zvigadziriso pakudzoka kwavo, izvo zvinobvisa kudiwa kwekutevera mafoni uye maemail kumapoka ebasa revatengi.
Kana chikumbiro chave mukati, mhinduro ichapa mutengesi kuoneka uye ruzivo rwe data muchikonzero (s) chekudzoka kuzofanotaura mutengo uye nguva inosanganiswa nekudzoka kweramangwana uye kutarisa chero isingawanzo, inogona kuita yekubiridzira nemutengi. Pane nzira dzakawanda mutengi anogona kuita hutsotsi hwekudzosera kana kudzorera kushungurudzwa, asi zvese zvinokonzeresa dambudziko guru kune vatengesi - mutengo.
Kushungurudzwa kwevatengi kwemitemo yekudzorera kunodhura mabhizinesi kusvika $ 15.9 bhiriyoni gore negore.
Kuonekwa kunopihwa neiyo yakasimba RMS mhinduro panguva dzekutanga nhanho dzekudzoka kunogona kuchengetedza vatengesi vepamhepo mutengo wenyeredzi. Kana kudzoka kwangoendeswa, danho rinotevera nderekuona kana mutengo wechigadzirwa chadzoserwa usingadhure pane kuti udzoserwe kudura rekambani. Izvi zvakanyanya kukosha kumabhizinesi e-e-commerce epasi rose ari kubata nemitengo yepamusoro yekutumira. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, bhizinesi rinogona kutumira mutengi chigadzirwa chitsva uye kuvaudza kuti vachengete chekare. Chikuva cheRMS chinopa iyo data inodiwa kuita izvi zvisungo.
Mamwe matura anozadzwa nekudzoka, saka mhinduro yeRMS inogona kuona kuti ndeipi nzvimbo inoshanda zvakanyanya zvichibva pane zvavanoda kuzadzisa zvidikanwi uye kuti vari padyo sei nenzvimbo yemutengi. Kana saiti ichinge yasarudzwa, chigadzirwa chinogona kugadziridzwa uye kuongororwa kunoonekwa sekwakakodzera isati yagadzirira kudzokera kune inventory.
Nhanho yekupedzisira muhurongwa hwekudzoka ndeye parcel tracking uye kupora. Maitiro ekubvisa marara echigadzirwa anodzoreredzwa, chero inodiwa kugadziriswa uye kugadziridzwa kunoitwa, uye kudzoka kune vese mutengi nebhizinesi kunopedzwa.
Kubatanidza yekupedzisira-kusvika-kumagumo RMS mhinduro ichave inocherekedza, inogara mhedzisiro pamabhizinesi e-commerce kubva pamari uye yevatengi sevhisi maonero. Zvishandiso zveRMS uye tekinoroji zvinogona kubatsira makambani kuwana mhedzisiro yavanoda nekuwedzera purofiti, kudzikisa kurasikirwa kwemari kubva pakudzoka kunodhura, nekuvandudza kugutsikana kwevatengi. Sezvo vatengi vanoramba vachimbundira e-commerce, kugona kweRMS kunopa vatengesi rugare rwepfungwa runodiwa kuti vape mhando yebasa revatengi uye kushanda nekutarisa pamutengo wakanaka.
ReverseLogix ndiyo yega yekupedzisira-kusvika-kumagumo, yepakati, uye yakazara yakazara inodzoserwa manejimendi system yakavakirwa yakanangana nekutengesa, ecommerce, kugadzira, uye 3PL masangano. Kunyangwe B2B, B2C kana hybrid, iyo ReverseLogix chikuva inofambisa, inotungamira, uye inoshuma pane yese inodzoka lifecycle.
Masangano anovimba neReverseLogix anounza hukuru hwakanyanya mutengi anodzorera ruzivo, chengetedza nguva yevashandi nekukurumidza mafambiro ebasa, uye wedzera purofiti ne360⁰ ruzivo rwekudzoserwa data.
Dzidza Zvakawanda Nezve ReverseLogix
Tags: 3plb2b2cb2cecommerceecommerce inodzokakugadziraparcel recoveryparcel trackingparcel tracking uye kuporaretail returnsinodzokainodzorera ruzivoinodzorera logisticsinodzosera manejimendi systemreturns processingreverse logisticsreverselogixrms
Gaurav Saran ndiye CEO we ReverseLogix, mupi wega wega wekupedzisira-kusvika-kumagumo, pakati, uye akabatanidzwa zvakakwana kudzoka kwekutonga masisitimu akavakirwa ekutengesa, ecommerce, kugadzira uye 3PL masangano. Asati atanga ReverseLogix, Saran akatungamira kutengesa kwemabhizinesi kumakambani eFortune 500 kuMicrosoft. Akabata zvinzvimbo zvehutungamiriri kumasangano akawanda ekutanga, achibudirira kuvashandura kubva pamatanho ekutanga kuenda kumakambani ekukura.
Iyo New Face yeE-Commerce: Iyo Impact yeMuchina Kudzidza muIndasitiri